Xukuumada Farmaajo oo heshiis noociisu cusub yahay la gashay shirkad laga leeyahay Mareykanka |
Xukuumada Farmaajo oo heshiis noociisu cusub yahay la gashay shirkad laga leeyahay Mareykanka
Warar hoose oo aan ka heleyno illo diplumasiyiin ah ayaa sheegaya in dowlada Somalia ay heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka.
Heshiiska dowlada Somalia iyo Shirkada u dhexeeya ayaa la sheegay inuu ku qotomo sida ay dowlada ugu matali laheyd xafiisyada muhiimka ah ee Mareykanka.
Heshiiska u dhexeeya dowlada Somalia iyo Shirkada lagu magacaabo SPG ayaa waxaa ku baxeysa dhaqaale dhan $400,000 oo dollar-ka Mareykanka ah,waxaana heshiiska bishan Somalia u saxiixay Abuukar Cismaan Baalle oo ah Danjiraha Soomaaliya ee QM.
Shirkada SPG ayaa waxaa heshiiska dhankeeda uga saxiixay madaxa fulinta SPG Christian Bourge, oo uu fadhigeedu yahay Gobolka Arizona.
Xogtu waxa ay intaa kusii dareysaa in shirkadan ay dowladda Somalia ka saacidi doonta u ololeynta in cunaqabateynta Kaalmada Ciidanka ah ee saaran Somalia ay ka qaaddo dowladda Mareykanka.
SPG waxa ay sidoo kale ka shaqeyn doontaa sida ay dowlada Somalia u heli lahayd dib u cusbooneysiinta Kaalmada Mareykanka ee Somalia ee dhinaca amaanka ah.
SPG, waxa ay sidoo kale kaalin weyn ka qaadan doontaa in Somalia laga qaado xayiraada dhanka socdaalka ah ee saaran Somalia iyo in sharikaddan ay Somalia ku matasho meelaha lagu jaangooyo Siyaasadda Mareykanka.
Musuqa Xubnaha Dowladda Soomaaliya dhexdeeda ah ayaa sabab u noqday in Mareykanka uu joojiyo kaalmadii dhinaca milatariga sida uu horay u sheegay Mareykanka.
Sidoo kale, shirkadan lagu magacaabo SPG ayaa horay wakiil uga noqotay dalalka Afghanistan, Saudi Arabia, Kenya, the Czech Republic, The Kingdom of Bahrain iyo Nepal iyo kuwo kale,waxaana ay dalalka kala shaqeysaa sidii ay waddamada u heli lahaayeen kaalmada Mareykanka.
Heshiiskan Sharikadda SPG waxaa ay bishiiba qaadan doontaa $100,000 oo Doollarka Mareykanka ah,waxaana uu qandaraaskan soconayaa muddo afar bilood ah.
Dhinaca kale, Dowlada Somalia iyo SPG ayaa heshiis ku gaaray in muddo kooban looga miro dhaliyo qorshaha lagu heshiiyay si xal loogu helo baahiyaha ay Somalia kaga xiran Mareykanka.